Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe Okuningi okuvela kumbhali Semalt Compartilha Um Segredo Sobre Como Se Tornar Bem Sucedido
Ezweni lebhizinisi, ukuhlaziywa kwebhizinisi kuye kwacatshangwa ukuthi kungaphakathiumbuso wabahlaziyi be-gauined-brained, kanti imisebenzi yekhwalithi, njengokukhangisa nokukhangisa, indawo yezinhlobo zokwenza izinto ezifanele. Lemisebenzi emibili, nakuba kokubili kubalulekile ekuphumeleleni kwebhizinisi, akhulumi ulimi olufanayo.
Igor Gamanenko, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende i-Semalt Amasevisi weDivaysi, ithi ukuhamba kwedatha enkulu kuye kwashintsha isimo se-quo - grain silos for sale. Abadali bale datha enkulu yizo zonke izincazelo eziphezulunesizukulwane esizayo. Baphila impilo yabo emithonjeni yezokuxhumana, ephethe cishe yonke imisebenzi yabo yansuku zonke ebhalwe imiyalezo,izithombe zedijithali nezinhlu zokudlalwayo kanye nezintandokazi zabo ezithunjwe amakhukhi e-intanethi.
Baxoxisana ngombhalo-ukukhuluma, i-emoji kanye ne-memes, konke okukhulunywe ngedijithali futhi ishintshelwe kudatha, okuyikhokhelwe ngokucacile ku-bits ne-bytes. Leli fomu yedatha yokumaketha yedijithali, eyenziwa yi-digital media and social media uye waletha imisebenzi emibili ndawonye. Ngakho-ke, ukuze uphumelele, abaphathi bebhizinisi balesi sikole kufanele bafunde ukukhuluma nge-geeknjengoba isu kanye ne-syntax yazo zombili izitayela idatha.
Uma ungafuni ibhizinisi lakho lihlale lingaphandle, udinga ukwamukela idatha intando yeningi. Idatha enkulu ibhekene nokuphila kwemisebenzi yebhizinisi, ngaleyo ndlela iveza intando yeningi entsha yedatha..Ivuliwe futhi ivuliweisixuku sivunyiwe. Futhi, ivolumu yayo kanye nokuhlukahluka kuyinkulu, okwenza kube nzima ukugcina inqubo yokubika yendabuko okuyinto ngokuyinhlokoinikeza idatha ngenqubo echazwe kahle.
Esikhundleni salokho, abahlaziyi bebhizinisi kudingeka bathathe ama-self-service analytics ukuze baqinisekeabaphathi bamakhoma wangaphambili bathola idatha abayidingayo ukuze benze izinqumo futhi bathathe izinyathelo ezivumelekile. Ngomqulu omkhulu wemininingwane etholakala kwifomu okungaphansi kokucutshungulwa, ibhizinisi lingasebenzisa ukuphathwa kwedatha, i-analytics, ukuphepha nokubika njengama-rails wokuqapha ukuqinisekisa ulwaziilokhu igeleza ngokuphepha nangembile.
Abadayisi kuye kwadingeka bafunde i-syntax entsha yedatha kanye ne-analytics. Akusekhookwanele ukukhomba amakhasimende ngokusekelwe emibhalweni yabantu. Manje kudingeka bafunde ukuthi bangazibona kanjani futhi basabele kanjani kumaphethini wokuziphatha abasafufusakanye nezintandokazi abazitholayo kuzo izinyathelo zedijithali zamakhasimende abo.
Ngokufanayo, abahlaziyizifunda manje sebefunda ulimi lokukhangisa nokuthi lungakwenza kanjaniguqulela ekuziphatheni kwamakhasimende nezintandokazi ezingalinganiswa nokuhlaziywa. Ngalendlela, bobabili abathengisi nabahlaziyi bangahlanganyelaithuthukise ukubika kwedatha nezithombe zokuhlaziya ezihambisana nezidingo zombili idatha yokugcina emuva nokubika kokugcina.ngoba.
Iningi lezinhloso zamakhasimende lishintsha kakhulu, ngakho-ke alinakuthathwa ngendlela ehleliwe isethi yezincazelo. Zizinto eziphefumula eziza futhi ziyahamba, kufana namagagasi olwandle, futhi ezimweni eziningi, umvuthwandaba usuwedlule isikhathi eside umbiko ukhiqizwa futhi uhanjiswa.
Ngakho-ke, uma ufuna ukuphumelela ezweni lanamuhla le-Big Data, udinga ukufunda ukuthi ungahlanganisa kanjani izinqubo zokulinganisa ezifana ne-analytics yebhizinisi kanye nesayensi yedatha ngenqubo yekhwalithi, ngoba isibonelo, isu lokuthengisa kanye nokuhlaziywa kwesinqumo. Ngokwenza lokhu, uzozibeka phansi ukuze uphumelele ku-landscape entsha ye-digital.